Zimbabwe: ED Meets Equatorial Guinea Envoy - allAfrica.com
"We also came here to congratulate the President and the people of Zimbabwe for the way they handled the transition leading to the new dispensation," said Mr Obiang.
"We wish him the best and we are proud of what he is doing both in Government and internationally. As Africans we are proud of what the President has done, proud of the Zimbabweans for the way they handled their affairs."
Mr Obiang, who is also his country's Minister of Mines, reiterated the country's support for Zimbabwe, saying they viewed the Southern African country as a good place for investment.
"In the future, we want to see Equatorial Guinea investing in various sectors of the economy in Zimbabwe," he said.
Zimbabwean security forces arrested British mercenary Simon Mann and 69 others at Robert Gabriel Mugabe International Airport when they landed to pick up weapons, while on their way to overthrow President Nguema's government.